कस्तो हुनेछ तपाइँको आजको दिन ? हेर्नुस् राशिफल - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो हुनेछ तपाइँको आजको दिन ? हेर्नुस् राशिफल
याे पनि पढ्नुस कस्तो छ तपाईंको आजको दिन ? पढ्नुस् राशिफल
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । – ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल